Fantatry ny Apple ny fomba hahazoam-bola | TeraNews.net
Afaka mahazo vola ny Apple
finday avo lenta-bola
mpanoratra Artem Navoaka tamin'ny 05.02.2018
Apple analysts dia nitatitra ny varotra finday tamin'ny volana lasa teo, nanome vaovao roa ny fitantanana - tsara sy ratsy. Amin'ny fitaovana finday avy amin'ny drafitra nambara tamina unit 100 tapitrisa dia azo atao ny manana 77,3 tapitrisa unit ihany - 77% ny tarehimarika nokasaina. Na izany aza, raha jerena ny vola, noho ny fiakaran'ny vidin'ny iPhone X ambony indrindra, dia nahavita nahazo fidiram-bolan'ny 88,3 miliara dolara ny marika amerikanina.
Herintaona lasa izay, raha ny tatitry ny telopolo nandritra ny vanim-potoana iray, dia nitatitra tombony tamin'ny 78,4 miliara dolara ny kaonty, izay $ 10 miliara latsaky ny tamin'ny taona 2017. Raha jerena fa ny 70% amin'ny varotra dia varotra avy any ivelany.
Saingy aloha loatra raha Apple manokatra champagne, satria herintaona, ny mpanjifa dia tsy nifindra tamin'ny marika ambany ka hatramin'ny fitaovana lafo vidy. Ny mpandinika dia nilaza fa ny tombotsoan'ny orinasa dia nanome ny iPhone X X mendrika ho 999 dolara. Raha eo amin'ny lafiny isan'ny fitaovana amidy dia mihena ny dynamics. Maty ny solosaina MAC sy ny finday avo lenta, araka ny porofoin'ny isa.
Raha ny sokajy "vokatra hafa", izay misy headphone, famantaranandro, Apple TV ary peripheral hafa, eto, mifanohitra amin'izany, dia afaka mahita ny fitomboan'ny varotra 36% (5,5 miliara dolara). Tamin'ny fampiharana Apple, ny marika dia nahavita nahazo 18% mihoatra ny tamin'ny vanim-potoana teo aloha (8,5 miliara dolara).
AirTag Apple - mpanara-maso kely ho an'ny zavatra
Smartphone finday BlackBerry Key 3 miaraka amin'ny fanohanan'ny 5G
Xiaomi Mi 11 Ultra - fiarovana IP68
Kia EV6 - ny fiara amin'ny ho avy mandresy an'i Eropa
Konektor HDMI: tariby, TV, mpilalao media - fahasamihafana
Ny satelita Starlink dia manafoana ny Internet tariby
Tenda AC19 AC2100 - router Wi-Fi an-trano